टीकापुर २६ पौष,
हुलाकी सडक खण्डको भजनी नगरपालिका वडा नं. ३ ठेकी स्थित कान्द्रा नदीमा निमार्णाधिन पुलको ठेकेदार काम छोडेर फरार भएका छन् । गत मंसिरबाट पुल निर्माणको काम शुरुवाट गरेका ठेकेदार विना सुचना ३ साता पहिले निर्माणको लागि प्रयोग हुने सामान सहित फरार भएको स्थानिय बल बहादुर बुढाले बताउनु भयो । उहाँले पुलको लागि नियमति काम भैरहेको भए पनि ठेकेदार सबै सामान सहित भाग्दा पुलको काम ठप्प भएको बताउनु भयो ।
४ स्पानको एक सय मिटर लम्बाईको पुलमा ५ वटा पिलर रहने भए पनि पुलको निर्माणको काममा लापरवाही तथा ठेकेदारको मनोमानीले अहिले सम्म पुर्व र पश्चिम साइटमा २ पिलर मात्र बनेको छ । पुलको काम संचालनको लागि अहिले आसपासमा ठुल् ठुला खाल्डा भएकाले थप जोखिम बढेको स्थानिय चित्र बहादुर साँउदले बताउनु भयो । उहाँले पुलको ठेकेदार भाग्नुमा स्थानिय तहको समेत लापरवाही भएको बताउनु भयो ।
४ वर्ष पहिले बनि सक्ने पुल यस वर्ष समयमा बन्ने अपेक्षा रहे पनि ठेकेदार नै भाग्दा यस पुल बन्ने सम्भावना नरहेको साँउले बताउनु भयो । कान्द्रा नदीले नगरबासी नै बिझाजित भएको क्षेत्रमा पुलले भजनी नगरपालिका वडा नं. ५, ७ र ३ को जोड्ने आशामा रहेका जनता अहिले सम्म पुल नहुदा वर्षातमा जोखिम मोलेर ढुङ्गाको भरमा भजनी नगरपालिकाको कार्यालय र बजार आउजाउ गर्न बाध्य रहेका छन्।
२०६७÷६८ मा लामा निमार्ण कन्ट्रक्सन सँग सम्झौता भई २०७१ मा सम्पन्न हुनु पर्ने हो । लामा निमार्ण कन्ट्रक्सनले विकास झा ठेकेदार मार्फत उक्त पुलको निमार्णको काम भैरहेको थियो । पुल निमार्णको ठेक्का लिएका ठेकेदार मार्फत ओभरसियर राधेश्याम शर्माले उक्त पुलको निमार्ण कार्यमा सुपरिवेक्षण तथा निर्माणको काम गराइ रहेका थिए । पुलको कामको लागि आवश्यक सामग्री ठेकेदार झाले समयमा उपलब्ध नगर्दा काम बन्द गरेर हिडेको ओभरसियर शर्माले बताउनु भयो ।
४ करोड २५ लाख वजेट रहेको पुल निमार्ण कार्यक्रमा निमार्ण कन्ट्रक्सन र ठेकेदारको लापरबाहीले सम्झौताको म्याद २ पल्ट थप भई सक्दा पनि पुलको कामले गति लिन सकेको छैन् ।